Community Radio Marsyangdi 95 MHz
Center for Community Development and Communication,Lamjung
राष्ट्रिय /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
सूचना तथा सन्देशहरु
सहयोग र सहकार्य
१७ किलो सुनसहित युवक पक्राउ
१६ कार्तिक, बेसीशहर । लमजुङ प्रहरीले १७ किलो सुन सहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । हिमाली जिल्ला मनाङबाट सुनलाई झोलामा लिएर मोटरसाइकलमार्फत झर्दै गरेका एक युवकलाई लमजुङ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । डिउटीमा खटिएका प्रहरीले मस्र्याङ्दी गाउँपालिका –३, खुदीबाट ती युवकलाई बिहिबार बिहान १० बजेतिर सुनसहित पक्राउ गरेको हो ।
मोटरसाइकलमा आउँदै गरेका ती युवकलाई प्रहरीले चेकिङका क्रममा रोकेपछि मोटरसाइकल छोडेर भागेका थिए । ती युवालाई भाग्दै गर्दा खुदी बजार क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको ट्राफिक प्रहरी जवान पुर्ण विकले बताए ।
प्रहरी नायव उपरिक्षक पदमबहादुर विष्टका अनुसार लामाको साथबाट १७ थान सुन समातिएको हो । उनका अनुसार युवकले पनि सुन नै रहेको भनी बयान दिएको छ । लामाको साथबाट सुन सहित ३० हजार ५ सय नगद, एक थान मोवाइल, नागरिकता, पासपोर्ट, मतदाता परिचय पत्र लगाएतका सामाग्री बरामत गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार मनाङको नासोङ गाउँपालिका–९, दानाक्युका ३१ वर्षीय पासाङ लामा भन्ने युवक पक्राउ परेका हुन् । उनले सुन बोक्न प्रयोग गरेको बा ५८ प ४२९१ नं. को २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल समेत समातिएको डिएसपी विष्टले बताए ।
खुदी सदरमुकाम बेंसीसहरबाट करीब ७ किलोमीटर उत्तरतर्फ मनाङ जाने बाटोमा पर्छ । सुनलाई तिब्बतको सीमाबाट मनाङ हुँदै ल्याइएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । समातिएका लामा मुख्य योजनाकार नभई भरिया रहेको हुन सक्ने भन्दै थप अनुसन्धान अघि बढाएको डिएस्पी विष्टले जानकारी दिए । यतिका ठूलो मात्रामा सुन समातिएको लमजुङको इतिहाशमा पहिलो घट्ना हो ।
Copyright 2016 Radio Marsyangdi 95 MHz . All Right Reserved.